40 Pazuva rokutanga mutore michero yemiti yakanaka kwazvo, mashizha emichindwe+ nematavi emiti ine mapazi mazhinji nemishambangwena yomumupata une rukova, mufare+ pamberi paJehovha Mwari wenyu kwemazuva manomwe.
12 Mufare pamberi paJehovha Mwari wenyu,+ imi nevanakomana venyu nevanasikana venyu nevarandarume venyu nevarandasikana venyu nomuRevhi ari mukati memagedhi enyu, nokuti haana mugove kana nhaka pamwe chete nemi.+
18 Asi uchachidyira pamberi paJehovha Mwari wako, munzvimbo ichasarudzwa naJehovha Mwari wako,+ iwe nomwanakomana wako nomwanasikana wako nomurandarume wako nomurandasikana wako nomuRevhi ari mukati memagedhi ako; ufare+ pamberi paJehovha Mwari wako pane zvose zvaunoita.
26 Unofanira kutengawo nemari yacho chero zvose zvingapangwa nomweya wako,+ mombe nemakwai nembudzi newaini nedoro rinodhaka+ nechinhu chero chipi zvacho chingakumbirwa nomweya wako kwauri; uye udyire ipapo pamberi paJehovha Mwari wako, ufare,+ iwe neimba yako.
11 Farisisai muna Jehovha mufare, imi makarurama;+
Shevedzerai nomufaro, imi mose mune mwoyo yakarurama.+
2 Shumirai Jehovha muchifara.+
Uyai pamberi pake muchishevedzera nomufaro.+
4 Garai muchifara munaShe.+ Ndinotizve, Farai!+